Bit By Bit - Ịjụ ajụjụ - 3.5.2 Wiki, nnyocha
Wiki, nnyocha nwee ọhụrụ adọ ụdị ụfọdụ nke mechiri emechi na-emeghe ajụjụ.
Na mgbakwunye na ịjụ ajụjụ na oge ndị ọzọ na n'ọnọdụ ndị ọzọ, nkà na ụzụ ọhụrụ na-enyekwa anyị ohere ịgbanwe ụdị nke ajụjụ. Imirikiti ajụjụ nyochaa na-emechi, ya na ndị na-aza ajụjụ na-ahọrọ site na setịpụ nke nhọrọ nke ndị nchọpụta dere. Nke a bụ usoro nke onye nchọpụta a ma ama na-eme nnyocha na-akpọ "itinye okwu n'ọnụ ndị mmadụ." Dịka ọmụmaatụ, lee ajụjụ nchọpụta a mechiri emechi:
"Ajụjụ na-esonụ bụ maka isiokwu nke ọrụ. Biko biko lee kaadị a ma gwa m ihe dị na ndepụta a ị ga - ahọrọ karịa ọrụ?
Enweghị ihe ize ndụ nke ịchụpụ
Oge na-arụ ọrụ dị mkpụmkpụ, ọtụtụ oge n'efu
Ohere maka ọganihu
Ọrụ ahụ dị mkpa, na-enyekwa mmetụta nke ịrụpụta ihe. "
Ma ndi a bu nani azịza ndi a? Ndị na-eme nchọpụta ọ ga-efu ihe dị mkpa site n'ịkwụsị ịzaghachi ise ndị a? Nhọrọ ọzọ na ajụjụ ndị mechiri emechi bụ ajụjụ nyocha a na-emechabeghị. Nke a bụ otu ajụjụ a jụrụ na mpempe akwụkwọ:
"Nke a na-esote ajụjụ bụ na isiokwu nke ọrụ. Ndị mmadụ anya n'ihi na dị iche iche ihe na ọrụ. Gịnị ka ị ga kasị ahọrọ na a ọrụ? "
Ọ bụ ezie na ajụjụ abụọ a yiri nke yiri ya, nchọpụta nyocha nke Howard Schuman na Stanley Presser (1979) gosipụtara na ha nwere ike ịpụta nsonaazụ dị iche iche: ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 60 nke azịza nke ajụjụ ndị a adịghị agụnye ndị nchọpụta ise - mepụtara mmeghachi omume ( nọmba 3.9).
Figure 3.9: Ihe si na nnwale nyocha nke na-egosi na nzaghachi nwere ike ịdabere ma a jụrụ ajụjụ ahụ na emechi ma ọ bụ mepee ụdị. Site na Schuman and Presser (1979) , tebụl 1.
Ọ bụ ezie na ajụjụ ndị mepere emepe na nke mechiri emechi nwere ike ịpụta ozi dị iche iche dị iche iche ma bụrụ ndị a ma ama na mmalite oge nyocha nke nnyocha, ajụjụ ndị a mechiri emechi abịawo na-achịkwa ubi ahụ. Ọchịchị a abughi n'ihi na egosipụtara ajụjụ ndị mechiri emechi iji nyekwuo mmụba dị mma, mana kama na ha dị mfe iji; usoro iji nyochaa ajụjụ na-emeghe bụ njehie-dị njọ na ọnụ. Ịhapụ ajụjụ ndị a na-emeghe bụ ihe ọjọọ n'ihi na ọ bụ kpọmkwem ozi ndị nchọpụta amaghị tupu oge ahụ nwere ike ịbụ ihe kachasị ọnụ ahịa.
Ntughari site na mmadu-nke enyere na nyocha nke ndi na komputa, choputara uzo ohuru nke nsogbu ochie a. Gịnị ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịnwe ajụjụ nyocha nke jikọtara atụmatụ kachasị mma nke ajụjụ abụọ mepee ma mechie? Nke ahụ bụ, gịnị ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịme nyocha nke abụọ na-emeghe maka ozi ọhụrụ ma mee ka nzaghachi dị mfe nyochaa? Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe Karen Levy na mụ (2015) gbalịrị ịmepụta.
Karịsịa, mụ na Karen chere na ebe nrụọrụ weebụ na-anakọta ma na-agwọta ọdịnaya nwere ike ime ka ndị mmadụ nwee ike ịkọwapụta ụdị nyocha ndị ọhụrụ. Akwụkwọ Wikipedia mere ka anyị bụrụ ndị a ma ama nke ọma - ihe atụ magburu onwe ya nke usoro na-emeghe, nke siri ike site na njirimara mepụtara-ya mere anyị kpọrọ nyocha ọhụrụ anyị nyochaa n'izu . Dị nnọọ ka Wikipedia na-agbanwe n'oge na-adabere na echiche nke ndị so na ya, anyị na-eche na nnyocha e mere na oge na-adabere na echiche nke ndị so na ya. Mụ na Karen mụpụtara ihe atọ na nyocha nke izu ga-ezuru: ha kwesịrị inwe anyaukwu, imekorita, na ime mgbanwe. Mgbe ahụ, site na otu ndị mmepe weebụ, anyị mepụtara mkpokọta weebụ nke nwere ike ịme ihe nyocha nke saịtị: www.allourideas.org .
Usoro nchịkọta data na nyocha nke izu na-egosipụta site na oru ngo anyị na New York City Mayor's Office iji jikọta echiche ndị obodo n'ime PlaNYC 2030, atụmatụ ime obodo gburugburu New York. Iji malite usoro, Ụlọ Ọrụ Mayor mere ndepụta nke 25 echiche dabere na mgbapụ ha gara aga (dịka, "Na-achọ ka ụlọ nnukwu ụlọ niile rụọ ọrụ nrụpụta ike" na "Kụziere ụmụaka gbasara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị ka akụkụ nke usoro ọmụmụ ụlọ akwụkwọ"). N'iji ikikere 25 a dị ka mkpụrụ, Ụlọ Ọrụ Mayor jụrụ ajụjụ ahụ "Olee nke ị chere bụ echiche ka mma maka ịmepụta omeiwu, New York City dị ukwuu?" E nyere ndị zara ya otu echiche (dịka, "Mepee akwụkwọ akwụkwọ gafee obodo ahụ dị ka ebe a na-akpọ ọha na eze "na" Mụbaa osisi ndị a na-elekwasị anya na osisi ndị nwere oke ụkwara ume ọkụ "), ma rịọ ha ka ha họrọ n'etiti ha (nọmba 3.10). Mgbe ị na-ahọrọ, a na-enye ndị na-azaghachi otu echiche abụọ ọzọ a họọrọ. Ha nwere ike ịnọgide na-enye ihe ọmụma banyere ihe ndị ha chọrọ ma ọ bụrụhaala na ha chọrọ ma ọ bụrụ site na ịme ntuli aka ma ọ bụ site na ịhọrọ "Enweghị m ike ikpebi." N'ụzọ dị oke mkpa, n'akụkụ ọ bụla, ndị na-aza ajụjụ nwere ike inye onyinye nke aka ha, bụ Mayor's Office-ghọrọ akụkụ nke ọdọ mmiri nke echiche na-enye ndị ọzọ. Ya mere, ajụjụ ndị a nabatara na-emeghe ma mechie n'otu oge.
Akara 3.10: Usoro okwu maka nyochaa izu. Panel (a) na-egosi nzaghachi ngosipụta na panel (b) na-egosi ihuenyo rụpụtara. Edeghachiri ya site na ikikere nke Salganik and Levy (2015) , isi nke 2.
Ụlọ ọrụ Mayor malitere nyochaa izu ya na October 2010 na nnọkọ nzukọ obodo iji nweta nzaghachi obibi. N'ime ihe dị ka ọnwa anọ, ndị na-aza ajụjụ 1,436 nyere onyinye 31,893 na echiche 464 ọhụrụ. N'ụzọ doro anya, mmadụ asatọ n'ime ihe 10 kachasị edemede dị iche iche bugoro site na ndị nabatara kama ịbụ akụkụ nke usoro echiche mkpụrụ sitere na Office Mayor. Na, dị ka anyị na-akọwa na akwụkwọ anyị, otu ihe a, na echiche ndị e bulitere na-atụle ka mma karịa echiche mkpụrụ, na-eme n'ọtụtụ nnyocha nyocha. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, site n'inwe ohere maka ozi ọhụrụ, ndị na-eme nchọpụta nwere ike ịmụta ihe ndị a ga-efu site na iji ụzọ mechibidoro.
Ewezuga ihe ndị a na-eme nchọpụta ndị a kpọmkwem, ọrụ nyochaa nke ugbua anyị na-egosikwa otú ụlọ ọrụ nyocha nke dijitalụ si egosi na ndị na-eme nchọpụta nwere ike ugbu a soro ụwa dị iche iche. Ndị ọkà mmụta sayensị enweela ike ịmepụta ezigbo usoro nke ọtụtụ ndị nwere ike iji: anyị natara ihe karịrị 10,000 nnyocha nyocha na nchịkọta ihe karịrị nde 15. Ike nke a iji mepụta ihe nwere ike iji mee ihe site n'eziokwu na ozugbo e wuru ebe nrụọrụ weebụ, ọ na-efu ihe ọ bụla iji mee ka ọ bụrụ onye ọ bụla nọ n'ụwa (n'ezie, nke a agaghị abụ eziokwu ma ọ bụrụ na anyị nwere ụmụ mmadụ nyochaa ndi mmadu). Ọzọkwa, ọnụ ọgụgụ a na-enyere ọtụtụ nyocha aka. Dịka ọmụmaatụ, nzaghachi nde iri nde a, nakwa nke mmiri nke ndị na-eso anyị, na-enye ihe nlele nyocha bara uru maka nyocha nke usoro ọmụmụ n'ọdịnihu. M ga-akọwa ihe ndị ọzọ banyere ohere nyocha ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ dijitalụ-karịsịa mkpụrụ ego efu-mgbe m na-atụle ihe ndị dị na isi 4.